Nang Kham Mart's Story: ESE Events Connect Community to Education | ADRA Myanmar | Justice. Compassion. Love
Nang Kham Mart's Story: ESE Events Connect Community to Education
TEES teacher and youth leader Nang Kham Mart is 26 years old from Nar Ngwe village, Lashio, Northern Shan State. Her family includes; her father Sai San Khin, mother Nang Mo Bain and her younger brother and sister. In 2015, Nang Kham Mart worked asanurse aid after which she started teaching Shan language from 2016 to 2019 paving the way for her future asaTEES teacher. Nang Kham Mart is one of hundreds of TEES (Teachers Establishing Education Services) teachers trained in the CASE2Learn project funded by the European Union in partnership with ADRA and RISE reaching remote ethnic communities to increase access to education services.
One of the projects activities is conducting ESE (Education Sensitisation Events) events in order to engage the community and raise awareness on the importance of education. Nang Kham Mart and her co-worker, Nang Kham Nyut, went to Mar Kat village to meet with the village chief and discussed holding an ESE event in their village, Nar Ngwe. The village chief invited other teachers to make comment and finally decided to hold the ESE event. In further meetings it was discussed the situation of the village, number of participants proposed and the ways in which the community would contribute, such as providing food. The village leader and teachers partnered with the local monastery and volunteers to make the preparations.
On the day of the ESE event, the number of participants was larger than expected. Children, parents, School Management Committees and teachers were all present. Nang Kham Mart remarks “I was very happy and pleasant about having this ESE event in my village. This is the first time holding an ESE event in my village. Before the start of the ESE ceremony, teachers, parents, SMC, leaders and children were motivated to participate in every activity and discussion and were happy doing it. In the ESE event, included was games relating to the value of education and some activities for children. At night, they performed songs and cultural dancing.”
Nang Kham Mart was motivated by this event seeing parents and their children more interested in education. After the ESE event, parents in particular had more confidence to talk and participate in discussion as well as having more hopes and ambitions for their children’s education than before. Now, parents want more of their children to be able to attend Middle School, High School and even go to University. Children are trying harder in their studies, sports and other school related activities.
Asaresult of the ESE event, parents, leaders, youth, religious leaders and children have become more connected and can feel unity in organising and participating together in education and social activities. The community is more supportive of children to learn not only their mother tongue language, but also Burmese and English while also maintaining their traditions and culture. Children are improving in communication by engaging in sports, painting and other education related activities through ESE community events. The change of attitude in regard to education has also seen the increased involvement of women participating and leading education in their communities as teachers like Nang Kham Mart.
To learn more about the European Union funded CASE2Learn project, click HERE
Written By: CRED 'Centre for Rural Education and Development', member of the RISE Network
Photo: © 2020 CRED | Nang Pan Hlaing
နန်းခမ်းမတ်၏ပုံပြင်: ESE (Education Sensitisation Events) ပွဲများသည် ရပ်ရွာလူထုအား ပညာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
TEES မှ ဆရာမနှင့် လူငယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် နန်းခမ်းမတ်သည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နန်းငွေကျေးရွာတွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ သူမ၏ဖခင်မှာ စိုင်းစံခင်ဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူမှာ နန်းမိုပိန်းဖြစ်ကာ မောင်လေးနှင့် ညီမလေးတို့လည်းရှိသည်။ နန်းခမ်းမတ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သူနာပြုဆရာမအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ရှမ်းဘာသာစကားစာသင်ကြားခြင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နန်းခမ်းမတ်သည် ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး ADRA နှင့် မိတ်ဖက် RISE တို့က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော ဝေးလံခေါင်သီသည့်ဒေသများတွင် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်ရရှိရေး CASE2Learn စီမံကိန်း၌ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည့် ရာနှင့်ချီသော TEES ဆရာများအနက်မှ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါစီမံကိန်း၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ ESE (Education Sensitisation Events) ကို ရပ်ရွာလူထုနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့် ပညာရေး၏အရေးပါမှုကို သိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ နန်းခမ်းမတ်နှင့် သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သူ နန်းခမ်းညွန့်တို့သည် ကျေးရွာလူကြီးများနှင့်တွေ့ဆုံရန် မန်ကတ်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယင်းကျေးရွာတွင်ပွဲကျင်းပနိုင်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနေဖြင့် အခြားဆရာများကိုလည်းမှတ်ချက်ပေးရန်ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါပွဲကိုကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထပ်မံပြုလုပ်သည့်အစည်းအဝေးများတွင်လည်း ကျေးရွာအခြေအနေ၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ရပ်ရွာလူထုက မည်သို့နည်းလမ်းများဖြင့်ပံ့ပိုးပေးမည်ကိုလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆရာများကလည်း ဒေသခံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အပါအဝင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားနေ့တွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်သည် မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုများပြားခဲ့သည်။ မိဘများ၊ ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံးလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍နန်းခမ်းမတ်ကလည်း “ကျွန်မရွာမှာဒီပွဲကိုကျင်းပရတာ အရမ်းပျော်တယ်။ ဒီရွာအနေနဲ့လည်း ဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ် ESE ပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်။ ပွဲစတင်မီနဲ့ ပွဲအတွင်းမှာလည်း ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ မိဘတွေနဲ့ ကျောင်းကော်မတီတွေ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကလေးတွေအကုန် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါလုပ်ရတာကိုလည်း သူတို့အရမ်းဝမ်းမြောက်ကြတယ်။ ပွဲအတွင်းမှာလည်း ကလေးတွေအတွက် ပညာပေးဂိမ်းတွေနဲ့ တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေပါပါတယ်။ ညဘက်မှာလည်းသီချင်းတွေဆိုပြီး ယဥ်ကျေးမှုအကတွေကို ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ယင်းကြောင့် မိဘများနှင့် ကလေးများသည် ပညာရေးကိုပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားလာသည့်အတွက်လည်း နန်းခမ်းမတ်အနေဖြင့် စိတ်အားတက်ကြွလာခဲ့သည်။ အဆိုပါပွဲပြီးနောက်တွင်လည်း မိဘများအနေဖြင့် ဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါဝင်ရန်တက်ကြွလာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကလေးများ၏ အနာဂတ်ပညာရေးမျှော်လင့်ချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များအတွက်လည်း ယခင်ကထက် ပို၍ ယုံကြည်မှုများတိုးလာခဲ့သည်။ ယခုအခါမိဘများသည် ၎င်းတို့၏ကလေးများအား အလယ်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းတက်ရောက်ပြီး တက္ကသိုလ်အထိသို့ပါ တက်ရောက်စေလိုကြသည်။ ကလေးများအနေဖြင့်လည်း သူတို့၏လေ့လာမှုများ၊ အားကစားနှင့် အခြားကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်း ပိုမိုကြိုးစားလာကြသည်။
ESE ပွဲ၏ရလဒ်အနေဖြင့် မိဘများ၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ လူငယ်များ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ကလေးများသည် အချင်းချင်းပိုမိုချိတ်ဆက်လာကြပြီး ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်း အတူတကွစည်းရုံးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြင့် စည်းရုံးညီညွတ်မှုကိုခံစားရလာသည်။ ရပ်ရွာလူထုအနေဖြင့်လည်း ကလေးများအား ၎င်းတို့၏မိခင်ဘာသာစကားသာမက ဗမာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ကိုပါသင်ယူရန်အားပေးပြီး ရိုးရာယဥ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းကြသည်။ ESE ပွဲမှတစ်ဆင့် ကလေးများသည် အားကစား၊ ပန်းချီနှင့် အခြားသောပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကိုတိုးတက်လာစေသည်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သောအမြင်အပြောင်းအလဲကြောင့် ပညာရေးဦးဆောင်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုတိုးမြှင့်လာပြီး နန်းခမ်းမတ်ကဲ့သို့ ဆရာများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်း၌ ပညာရေးကို ဦးဆောင်လာကြသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)က ထောက်ပံ့ထားသည့် CASE2Learn စီမံကိန်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက www.adramyanmar.org/education တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။